Ụdị Ụdị - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Ụdị Ụdị na ogwe aka eme ka nwoke nwee ihu ọchị
ndị ikom n'anya inwe Ụdị Ụdị na ogwe aka ala. Eche egbu egbu a na-egosi ọdịdị anụ ọhịa ha.
2. Ụdị Ụdị n'akụkụ ogwe aka dị ala na-eme ka mmadụ dị mma
Mmadụ na-enwe mmasị ịnwe Ụdị Ọkpụkpụ n'akụkụ akụkụ aka ala ya na ejiji ink ojii. Nke a na-enye anya dị mma
3. Ụdị Ụdị na ogwe aka dị ala na-eme ka mmadụ lee anya
Ụdị Ụdị na ogwe aka dị ala na - eme ka nwoke dị oke egwu
4. Ụdị Ụdị na ogwe aka dị elu na-eme ka mmadụ bụrụ onye nzuzu
Ndị mmadụ na-ahụ Arrow Tattoo na ogwe aka aka ha iji mee ha ka ha dị ka nwoke na onye nzuzu
5. Ụdị Ụdị na ihu nke aka na-eme ka mmadụ dị jụụ
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnwe Ụdị Ọkpụkpụ n'elu ogwe aka ha dị ala nke aka ha. Nke a na-egosi ọdịdị nwoke ha
6. Ụdị Ụdị na -eme mkpịsị uhie ojii na-eme ka nwoke mara mma
Ndị ikom Brown na-aga maka akara mkpịsị ojii ojii Arrow Tattoo na nkwojiaka ha; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma maa mma
7. Ụdị Ụdị na azụ ya na ejiji onk nke oji na-eweta ihe na-adọrọ adọrọ
Ụmụ agbọghọ ndị na-acha uhie uhie ga-enwe mmasị na mkpịsị onk nke ink Arrow Tattoo na n'elu azụ ha; egbu egbu egbu a na-eme ha ka ha dị mma ma mara mma
8. Ụdị Ụdị na ogwe aka dị n'ihu na-eme ka ihe efu dị anya
Ndị mmadụ hụrụ Arrow Tattoo na ogwe aka ha; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ihe mara mma ma dị mma
9. Ụdị Ụdị na ihu na-eme ka onye na-ahụ anya na-ele anya na nwoke
Ụmụ nwoke na-acha aja aja na-ahụ Ụdị Arrow na ogwe aka nke nwere mkpịsị ink ojii; Ejiji egbu egbu a na-eme ka anya na-acha
10. Ụdị Ụdị na mkpịsị ink nke oji na ogwe aka dị ala na-egosi anya ha
Ndị mmadụ na-ahụ Ụdị Arrow na-eji ntanye onk nke onu na aka aka. Nke a na-enye ọdịdị nwoke
11. Ụdị Ụdị na ogwe aka na-eme ka nwoke na-ele anya
Brown na-ahụ Arrow Tattoo na ogwe aka ha; ihe eji egbu egbu a na-acha odo odo na-emetụta akpụkpọ ahụ iji mee ka ha mara mma
12. Ụdị Ụdị na azụ ala dị ala na-eme ka mmadụ dị jụụ
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnweta Ụdị Arrow na ogwe aka dị ala azụ; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
Tags:egbu egbu egbu
egbu egbudi na nwunyeegbu egbu osisi lotusakara ntụpọUche obikoi ika tattooegbu egbu mmiriudara okooko osisiarịlịka arịlịkaagbụrụ eboaka akaọnwa tattoosegbu egbu egbuegbu egbu ebighi ebizodiac akara akararip tattoosazụ azụn'olu oluGeometric Tattoosngwusi pusiokpueze okpuezendị mmụọ oziaka akaụkwụ akaegbu egbu diamondNtuba ntughariegbu egbu maka ụmụ nwokena-adọ aka mmandị na-egbuke egbukeakpị akpịnnụnụmehndi imeweegbugbu maka ụmụ agbọghọỤdị ekpomkpaakwara obiụmụnne mgbuAnkle Tattoosna-egbu egbuEgwu ugoenyí egbu egbuegbugbu egbugbuechiche egbugbuima ima mmaọdụm ọdụmegbu egbu okpuegbu egbu hennamma tattoosenyi kacha mma enyiegwu egwuaka mma aka